रोचक पेटमा भएको बोसो घटाउने सरल उपाय ! जान्नुहोस
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: दिनभरको भागदौड र व्यस्तताले भरिएको जिन्दगी र अनियमित खानपानले गर्दा हामी आफ्नो स्वास्थ बिग्रिरहेको हुन्छ । जसको कारणले कैयन शारीरिक समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको हुनसक्छ। यस्तै एक समस्या हो- मोटोपना । जसबाट बच्नको लागि हामी धेरै खालका उपायहरु पनि अपनाउछौँ । घन्टौं जीममा पसिना बगाँउछौ र धेरै खालको शारीरिक अभ्यासहरु पनि गछौं तर पनि त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौं ।
त्यस्तै यसले मोटोपना कम भइहाले पनि तपाईको अनुहारको चमक हराउने छ ।
अनुहारका पूराना भन्दा पूराना दाग-धब्बा हटाउन निकै
प्रभावकारी हुन्छ मह, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् !
धेरै जसो समय अनुहारमा चमक हुँदा हुँदै पनि दाग-धब्बाको कारण हाम्रो अनुहारको प्राकृतिक सौन्दर्य छोटो समयमा फिक्का देखिन्छ। हामी यस्ता जिद्दी डग-धब्बाबाट छुटकारा पाउनको लागि थुप्रै उपाय गर्ने गर्छौं तर पनि यसबाट मुक्ति पुन असमर्थ रहन्छौं। यस्तोमा आज हामी तपाईंलाई यो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि उत्तम समाधान बताउनेछौं जसको प्रयोगले केही दिनमै अनुहारका दाग-धब्बा हराएर जान्छ।
यो उपाय हो मह। वास्तवमा, मह केवल स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन तर सौन्दर्यका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसोभए आउनुहोस् महका केही अतुलनीय गुणहरूका बारे जानौं …
महमा पाइने गुणहरु:
महमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, भिटामिन ए, बी, सी, आइरन, म्यग्नेशियम, क्याल्सियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि प्रशस्त मात्रा पाइन्छ। मह कार्बोहाइड्रेटको एक प्राकृतिक स्रोत हो। यसै कारणले पनि महको सेवनले शरीरलाई शक्ति, जोश र उर्जा प्रदान गर्नुका साथै शरीरलाई रोगहरू विरूद्ध लड्ने क्षमाता बढाउँछ।
दाग-धब्बा हटाउनको लागि…
१. जलेको दागमा मह प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने महमा एन्टीसेप्टिक र हिलिंग गुणहरू हुन्छन्। जलेर छालामा बसेको दागमा दैनिक रूपमा मह प्रयोग गर्दा उक्त दाग छिटै हराएर जान्छ।
२. क्रीम, चन्दन र चनाको पीठोमा मह मिलाएर यसलाई फेस प्याकको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसले तपाईंको अनुहारको दाग-धब्बा हटाउँछ र छाला नरम तथा मुलायम पनि बनाउँछ।
३. यदि तपाईको अनुहारमा डण्डीफोरको दाग छ वा काला दाग-धब्बा छ भने महको प्रयोग गरेर छालाको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।